Waa maxay matoorrada biyaha ku shaqeeya cadceedda maxayse u yihiin | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Teknolojiyada cusub
Sanadihii la soo dhaafay, farsamooyin cusub oo looga dhaansado biyaha tamarta la cusboonaysiin karo ayaa soo ifbaxayay. Xaaladdan oo kale, way dhalatay bamka biyaha qoraxda sida mid ka mid ah codsiyada tamarta qoraxda.
Mashiinnada biyaha ku shaqeeya ee qoraxda waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro biyaha nidaamyada qotada dheer, cadaadiska biyaha, taangiyada, iwm. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro biyaha qiime jaban iyo wax ku ool ah oo ku filan. Ma rabtaa inaad ogaato waxtarrada iyo faa'iido-darrada bambooyinkan oo aad taqaan midka aad u baahan tahay iyadoo loo eegayo baahidaada?
1 Waa maxay bamka biyaha ku shaqeeya cadceedda maxaase loogu talagalay?
2 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
3 Noocyada matoorka biyaha qoraxda
4 Maxaa bambooyin ah oo aan isticmaalaa haddii aan waraabiyo dalagyada waraabka ah?
Waa maxay bamka biyaha ku shaqeeya cadceedda maxaase loogu talagalay?
Mishiinka biyaha ku shaqeeya cadceedda waa aalad awood u leh inay si toos ah u shubto biyaha hadda socda iyo Waxay ku shaqeysaa tamarta qoraxda. Waxaa jira dhowr nooc oo bambooyin qorraxda ku shaqeeya ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin qorraxda photovoltaic, mashiinka biyaha kuleylka ku shaqeeya ee qoraxda ku shaqeeya iyo matoorka biyaha kulul ee gudaha.
Bambooyinkan biyaha soo saara ayaa ah kuwo quusin kara quwadda ka timaadda qorraxda. Waxay ugu shaqeeyaan si la mid ah matoorada kale ee biyaha soo saara, marka laga reebo in ilaha awoodooda la cusboonaysiin karo. Waxaa loo isticmaalaa waraabinta dhulka beeraha, dadka raba inay ka soo saaraan biyaha ceel si ay u soo saaraan, isbitaaladaas doonaya inay u diraan biyo kulul biyo qabow, iwm. Waxaas oo dhan iyada oo laga faa'iideysanayo qiimaheeda yar, maadaama ay ku shaqeyneyso tamar qorraxda ka timaadda.
Sida dhammaan qalabka ku shaqeeya tamarta dib loo cusboonaysiin karo, mashiinka biyaha ku shaqeeya cadceedda wuxuu leeyahay xoogaa faa'iido iyo faa'iido darro ah marka loo eego kuwa dhaqameed.
Ka mid ah faa'iidooyinka aan helno:
Iyagu waa 100% nadiif iyo deegaan, si ayan uga tagin nooc kasta oo haraaga ama wasakhda ah.
Waa tamar aan la koobi karinmaaddaama ay ka timaaddo ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Waxay siinaysaa suurtogalnimada bamgareynta meelaha go'doonsan ee aan lahayn shabakad koronto ama meelaha ay adag tahay in la buuxiyo taangiyada naaftada.
Waxay leedahay codsiyo badan oo ay sifiican ugu shaqeyso. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaalaa in laga soo saaro biyaha ceelka guri, si loogu kiciyo biyaha waraabka dalagyada, waraabka faleebada ah, ka soo saarista biyaha wasakhda ah taangiyada ama haamaha qashinka, barkadaha dabaasha, biyaha kaydadka iwm.
Dhibaatooyinka ayaa si cad u muuqda. Sida dhammaan qalabka ku shaqeeya cadceedda, awooddooda iyo waxqabadkoodu waxay ku kooban yihiin tamarta ay qorraxda ka soo qaadan karaan. Maalmo daruuro, habeeno, iwm. Way ku dhib yar yihiin markay isticmaalayaan bamka noocan ah. Si kastaba ha noqotee, marka xaaladaha shucaaca qoraxda ay yihiin kuwo hagaagsan, matoorkan wuxuu yeelan karaa waxqabad iyo hufnaan weyn.
Noocyada matoorka biyaha qoraxda
Waxaa jira dhowr nooc oo matoorrada biyaha qorraxda leh waana inaan ogaanno midka ay tahay inaan iibsanno, iyadoo kuxiran waxa aan u baahan doonno.
Waxaa jira bambooyinnada quusin kara iyo kuwa dusha sare ah. Labadan bambooyin waxay ku kala duwan yihiin astaamaha qaarkood oo ka dhigaya inay u adeegaan hal nooc oo shaqo ah oo aysan u adeegin tan kale.
Dhinaca kale, bamka biyaha qoraxda lagu quusin karo waa in la hoos dhigaa dhulka hoostiisa. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in laga soo saaro biyaha meel qoto dheer, sida ceel, keyd ama ceel. Waxay kuxirantahay mugga biyaha aad rabto inaad soosaarto iyo qoto dheerida ay biyuhu yihiin, waxaa jira dhowr nooc oo ah awooda matoorkaan.
Dhanka kale, waa bamka dusha sare taas oo sida magacaba ka muuqata ka shaqeysa dusha sare. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo cadaadiska biyaha halkaasoo sahaydu aysan si fiican u gaarin. Tusaale ahaan, guryaha qaar go'doonsan, matoorka noocan ah waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo cadaadiska biyaha. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa ugu horreyn codsiyada waraabka.
Markaad rabto inaad wax ka bedesho waraabka oo aad kordhiso waxtarkiisa, bambooyin biyo qorraxda oogada ah ayaa la isticmaalaa. Kuwani waxaa loo isticmaalaa waraabka faleebada ee beero iyo beero, waraabinta barnaamijka iyo marka la isku dayayo in la kordhiyo heerka socodka ee lagu waraabiyo. Xaaladahan oo dhan noocyadooda, bambooyin dhaqameed waa inay isticmaalaan shidaal wasakhda sunta ah. Si kastaba ha noqotee, matoorkan wuxuu adeegsadaa tamarta qorraxda oo gebi ahaanba waa nadiif.
Sida faa'iidooyinka ay u siiso waraabka, waa kuwo aan la qiyaasi karin. Kaliya bamka biyaha qoraxda Waxay awood u leedahay inay soo saarto biyo ku filan oo ay ku qoyso waraabka 10 hektar oo dhul ah.
Maxaa bambooyin ah oo aan isticmaalaa haddii aan waraabiyo dalagyada waraabka ah?
Dalagyada waraabka ahi waxay u baahan yihiin tiro badan oo biyo ah si ay u koraan una kordhiyaan wax soo saarka. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo ogaado nooca bambooyinku yahay midka ugu faa'iidada badan xaalad kasta.
Haddii dalaggeenna waraabka ahi ka bataan baahida biyaha ka sarreeya 4500 litir oo biyo ah maalintii, Waxaa aad loogu talinayaa in la isticmaalo bamka biyaha ku shaqeeya ee qoraxda. Bambooyinkan ayaa leh awood bamgareyn ah bambooyin dusha sare ah, iyagoo awooda inay soo saaraan ilaa 13500 litir oo biyo ah maalintii. Waa run in bambooyinkani ay ka qaalisan yihiin kuwa dusha, laakiin waxaan ka hadli doonaa qiimaha gadaal.
Dhanka kale, haddii waxa aan ku qasbaynay ay ka badnaan waayaan 4500 litir oo biyo ah maalintii, waxaa la doorbidaa in la isticmaalo bamka biyaha qoraxda ku shaqeeya. Mashiinka noocaan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa waraabka dalagyada oo leh aag yar iyo beero aan u baahnayn biyo badan. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa xoolaha si ay u waraabiyaan daaqa.
Qiimayaashu waa kuwo aad u muujinaya, marka la eego bambooyin badan oo ka jira suuqyada. Awoodda iyo tayada sare, qiimaha sare. Qiimaha matoorrada biyaha ku shaqeeya ee 12v, oo ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo waraabinta, oo awood u leh inay soo saaraan saddex litir daqiiqaddii, Waxay ku dhow yihiin 60 euro.
Qiimayaashu aad ayey u kala duwan yihiin iyadoo kuxiran awoodda, laakiin macnaheedu maahan inay saami tahay. Waxaad si fiican u heli kartaa lix litir bambooyin daqiiqaddii at 70 euro.
Macluumaadkan waxaad xaqiiqdii ku ogaan doontaa wax dheeraad ah oo ku saabsan matoorrada biyaha qorraxda. Qalabkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan sii wadno horumarka madaxbanaanida shidaalka tan iyo, sida caadiga ah, bambooyinkani waxay u baahan doonaan naaftada ama baatroolka tanina waxay keenaysaa kharash ku baxa iibsashada shidaalka, bedelka iyo gaadiidka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Bamka biyaha ku shaqeeya
Dalagyada Hydroponic, maxay yihiin iyo sida mid looga sameeyo guriga